Ch 8 मार्क – 2माछा
घर / बाइबल / मार्क को सुसमाचार / Ch 8 मार्क
8:1 ती दिनहरुमा, फेरि, त्यहाँ ठूलो भीड थियो जब, र तिनीहरूले खान केहि छैन, आफ्ना चेलाहरूलाई सँगै कल, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो:
8:2 "म भीड लागि दया, किनभने, हेर, तीन दिनको लागि अब मसँग persevered छ, र तिनीहरूले खान केहि छैन.
8:3 र म तिनीहरूलाई पठाउन थिए भने टाढा आफ्नो घर व्रत, तिनीहरूलाई केही टाढा आए लागि तिनीहरूले बाटोमा बेहोश हुन सक्छ। ".
8:4 र उहाँका चेलाहरू उहाँलाई जवाफ दिए, "जहाँ जो कोहिले उजाडस्थानमा तिनीहरूलाई लागि पर्याप्त रोटी प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ?"
8:5 र उहाँले तिनीहरूलाई प्रश्न, "कति वटा रोटी तपाईं के?"अनि तिनीहरूले भने, "सात।"
8:6 र उहाँले भुइँमा खान तल बस्न भीड निर्देशन. र सात वटा रोटी लिएर, दिने धन्यवाद, उहाँले भङ्ग र यसलाई आफ्ना चेलाहरूलाई गर्न तिनीहरूलाई अघि ठाउँमा दिनुभयो. र तिनीहरूले भीड अघि यी राखिएको.
8:7 र तिनीहरूले केही साना माछा थियो. अनि उहाँले तिनीहरूलाई आशिष्, र उहाँले उनलाई पहिले राखिएको आदेश.
8:8 र तिनीहरूले खाए र सन्तुष्ट थिए. र तिनीहरूले टुकडे देखि बाँकी गरिएको थियो के उठाए: सात टोकरी.
8:9 र जो खाए बारे चार हजार थिए. र उहाँले तिनीहरूलाई खारेज.
8:10 र द्रुत आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा डुङ्गामा चढाई, उहाँले Dalmanutha को भागमा गए.
8:11 र फरिसीहरू बाहिर गए र उहाँलाई साथ contend गर्न थाले, उहाँबाट स्वर्गबाट ​​एउटा चिन्ह खोजिरहेका, उहाँलाई परीक्षण.
8:12 र आत्मा मा गहिरो शोक, उहाँले भन्नुभयो: "किन यो पुस्ता चिन्ह खोजी गर्छ? Amen, म तपाईंलाई भन्न, केवल एक चिन्ह यो पुस्ता दिइनेछ भने!"
8:13 र टाढा तिनीहरूलाई पठाउन, उहाँले फेरि डुङ्गामा चढेका, र त्यो समुद्र मार्फत टाढा गए.
8:14 र तिनीहरूले रोटी लिन भूल. र तिनीहरूले डुङ्गामा तिनीहरूलाई कुनै पनि छैन, एक आवारागर्दी ~ बाहेक.
8:15 अनि उहाँले तिनीहरूलाई निर्देशन, यसो: "विचार र फरिसीहरूको र हेरोदको खमिर को खमिर को सावधान रहन।"
8:16 र तिनीहरूले आपसमा यस छलफल, यसो, "को लागि हामी कुनै रोटी छ।"
8:17 अनि येशूले, थाह यो, तिनीहरूलाई भन्नुभयो: "तपाईं कुनै रोटी छ किनभने यो छ कि तपाईं किन विचार गर्छन्? तपाईंले अहिलेसम्म थाहा छैन वा बुझ्न? तपाईं अझै पनि आफ्नो हृदयमा अन्धो छन्?
8:18 आँखा भइरहेको, तपाईं देख्न छैन? र कान भएको, तपाईं सुन्न छैन? तपाईं सम्झना छैन,
8:19 जब म पाँच हजार बीच पाँच प्रेम भङ्ग, तपाईं कति बास्केट पूर्ण टुकडे को लिए?"तिनीहरूले उहाँलाई भने, "बाह्र जना।"
8:20 "अनि सात वटा रोटी चार हजार बीचमा थिए जब, तपाईं कसरी टुकडे को धेरै बास्केट लिनु?"अनि तिनीहरूले उहाँलाई भने, "सात।"
8:21 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "यो कस्तो छ तपाईंलाई अझै नबुझेका?"
8:22 र तिनीहरूले बेथसेदा गए. र तिनीहरूले उहाँलाई एक अन्धा मानिसको ल्याए. र तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती, त्यसैले उहाँलाई छुन भनेर.
8:23 र हात द्वारा अन्धा मानिसको लिइरहेको, उहाँले गाउँमा परे उहाँलाई नेतृत्व. र आफ्नो आँखा मा थुक्नु राख्दै, उहाँलाई आफ्नो हात बिछाउने, उहाँले केहि देख्न सक्थे भने उहाँलाई सोधे.
8:24 र हेर्दै, उहाँले भन्नुभयो, "म मानिसहरू हेर्न तर तिनीहरूले हिड्ने रूखहरू जस्तै हुन्।"
8:25 अर्को उहाँले आफ्नो आँखा फेरि आफ्नो हात राखिएको, र उहाँले हेर्न थाले. र उहाँले पुनःस्थापित थियो, उहाँले स्पष्ट सबै देख्न सक्थे भनेर.
8:26 र उहाँले आफ्नो घरमा उहाँलाई पठाइयो, यसो, "आफ्नो घर मा जानुहोस्, र तपाईं शहर प्रवेश भने, कुनै एक बताउनुहोस्। "
8:27 अनि येशूले सिजरिया फिलिप्पीका शहरहरू मा आफ्ना चेलाहरूलाई संग छुट्यो. र बाटो मा, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रश्न, तिनीहरूलाई यसो, "मानिसहरू, म कसले भन्न गर्छन्?"
8:28 अनि तिनीहरूले यसो भन्दै उहाँको जवाफ: "यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने, अरूलाई एलियाले, सायद अझै पनि अरूलाई अगमवक्ताहरूलाई को एक। "
8:29 त्यसपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "यद्यपि साँच्चै, जो म हुँ भनी भन्न गर्छन्?"पत्रुसले उहाँलाई यसो भन्दै द्वारा प्रतिक्रिया, "तपाईं ख्रीष्ट हुन्।"
8:30 अनि उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो सल्लाह दिए, उहाँलाई बारेमा कसैलाई बताउन छैन.
8:31 अनि उहाँले मानिसको पुत्र धेरै कुराहरू ग्रस्त पर्छ भनेर तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो, र प्राचीनहरूले अस्वीकार, र उच्च पूजाहारीहरू, र शास्त्री, र हत्या गर्न, र तीन दिन पछि फेरि वृद्धि.
8:32 अनि उहाँले खुल्लमखुल्ला शब्द बोल्नुभयो. अनि पत्रुस, उहाँलाई अलग लिएर, उहाँलाई सुधार गर्न थाले.
8:33 र दूर बदल र उहाँको चेलाहरू देख, उहाँले पत्रुस यस्तो सल्लाह दिए, यसो, "मलाई पछि प्राप्त, शैतानले, तपाईं परमेश्वरको छन् कि कुरा रुचि छैन लागि, तर कुराहरू मानिसहरूको हो कि। "
8:34 र आफ्ना चेलाहरूलाई संग भीड सँगै कल, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "कसैले रोज्ने भने मलाई पछ्याउन, उहाँलाई आफूलाई इन्कार गरौं, र आफ्नो पार लिन, र मलाई पछ्याउन.
8:35 जसले आफ्नो जीवन बचाउन छान्नुभएको हुनेछ लागि, यो गुमाउनु. तर जसले आफ्नो जीवन गुमाएका हुनेछ, मेरो खातिर र सुसमाचारको लागि, यो बचत हुनेछ.
8:36 यो एक मानिस कसरी लाभ उठाउन गर्छ लागि, उहाँले सारा संसार कमाइहाले, र अझै आफ्नो प्राण गर्न हानि गराउँछ?
8:37 वा, मानिस आफ्नो प्राण लागि विनिमय मा के दिन हुनेछ?
8:38 जसले मेरो लज्जित भएको छ र मेरो शब्दहरू, यो adulterous र पापी पुस्ता बीच, मानिसको पुत्र पनि उहाँको लज्जित हुनेछ, उहाँले आफ्नो पिताको महिमा मा पुग्नु हुनेछ जब, पवित्र स्वर्गदूतहरू संग। "
8:39 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, "Amen म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यहाँ तिनीहरूले परमेश्वरको राज्यको शक्ति आइपुगेपछि हेर्न सम्म मृत्यु स्वाद गर्ने पर्छ यहाँ खडा गर्नेहरूमध्ये केही छन्। "